Kedu ihe bụ okpomoku | Netwọk Mgbasa Ozi
O yiri ka n'izu a, ụbọchị nkịta a na-atụ ụjọ ya abịaala, yabụ ị ga-eji ndidi kee onwe gị ma dọrọ ndị na-agbapụ na ikuku ikuku iji nwee ike iguzogide ụkpụrụ omume dị elu dị otú ahụ.
Igwe okpomọkụ ahụ na-ezo aka n'oge kachasị ọkụ nke afọ na nke okpomọkụ karịrị ogo 4 na-agbanwe agbanwe na mfe.
Dị ka ọnụ ọgụgụ dị iche iche si dị, ụbọchị nkịta bụ oge kachasị ọkụ nke afọ na ebe okpomọkụ na-eru ụkpụrụ kachasị elu. Oge nke oge a na-ekpuchikarị site na July 15 ruo August 15, ọ bụ ezie na ọ na-adaberekarị na mpaghara ọ bụla. Enweghị ụbọchị ọ bụla nke mbido a na nke a bụ n'ihi ọtụtụ ihe dịka eziokwu ahụ Anyanwụ dị oke elu na mmalite oge ọkọchị ma ọ bụ radieshon nke anyanwụ nke na-eme ka ụwa kpoo ọkụ.
N'ụzọ dị otú a, okpomọkụ ahụ na-amalite mgbe e mesịrị na Spain, ebe n'akụkụ ndị ọzọ nke Europe ma ọ bụ Africa ọ na-ebuwanye ụzọ. N'oge oge okpomọkụ ahụ na-adịgide, ikuku ikuku na-ekpo ọkụ na nkụ si North Africa na-arụkarị kwa mgbe. N'okwu ndị a, ọ dị mkpa ịme usoro dị iche iche iji zere ọrịa ọkụ dị ize ndụ n'ihi na ha nwere ike ibute ọnwụ nke onye na-arịa ha mgbe ụfọdụ.
Dabere na amụma ihu igwe, ọkụ a ga-adịru ụbọchị atọ ma ọ bụ 4 yana ogo karịa ogo 40. Otú ọ dị okpomọkụ dị ebe a iji nọrọ na Enwere mpaghara nke peninshula ebe ogo okpomọkụ n’izu ndị a ga-adị ihe dịka ogo 38. N'iburu eziokwu ndị a, ọ ga-adị jụụ nke ọma ma chebe onwe gị dịka o kwere mee site na oke okpomọkụ dị elu n'oge ọkọchị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ebili mmiri ọkụ » Kedu ihe bụ okpomọkụ